Ingiriiska oo sheegay inuu joojinayo lacagaha Ceyrta ah oo uu siiyo dadka ajanabiga oo ay ka mid yihiin Soomaalida. Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Ingiriiska oo sheegay inuu joojinayo lacagaha Ceyrta ah oo uu siiyo dadka ajanabiga oo ay ka mid yihiin Soomaalida. Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay sheegtay in ay joojineyso lacagaha ceyrta ah oo ay siiso dadka ay ka mid yihiin Soomaalida ee aan u dhalan dalkaasi.
Raiisul waasaaraha dalka Ingiriiska Devid Cameron ayaa Shir jaraaid oo uu qabtay waxa uu ku sheegay in dowladiisa ay joojineyso lacagaha ceyrta ah oo ay siiyaan dadka aan u dhalan dalkaasi oo ay Soomaalida ka mid yihiin.
Devid Cameron ayaa waxa uu sheegay in aysan awoodin bixinta lacagaha uga baxa dadka Ajanabiga ee ku sugan Ingiriiska oo Soomaalida ay ka mid yihiin, waxaana uu ugu baaqay dadka in ay shaqeystaan oo ay cunaan dhididkooda.
Bil waliba dadka aan shaqeyn oo ay ka mid yihiin dadka Soomaalida ee ku sugan dalka Ingiriiska waxa ay qaataan lacago ceyr ah iyaga oo aan shaqeyn taasi oo siiso dowladda Ingiriiska, waxaana hadii ay dowladda joojiso bixinta lacagahaasi ay saameyn doontaa dad badan oo Soomaali ah.